Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Galbeedka Australia (Perth) oo meel kuwada ciiday.
Jaaliyada Galbeedka Australia (Perth) oo meel kuwada ciiday.
Waxaa taariikhdu markaya ahayd 15/10/13 laga ciiday dhamaan wadamada dadka Muslimka ahi kunoolyihiin. Qaarada/Dalka Australia ayaa ka mid ah dalalka ay dagan yihiin dad muslimiin ah oo muddo fog soo galay qaaradaa. Sidoo kale shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ayaa laga soo bilaabo 80tamaadkii qarnigii tagay imanayay Australiya oo daganaansho ka helay.
Jaaliyadda S.Ogadenya ee dalka Australia ayaa ka mid ah jaaliyadaha sida fiican u nidaamsan lehna guddiyo jaaliyadeed oo ka hawlgala dhamaan gobolada uu ka kooban yahay dalkaa.
Hadaba waxaa si farxadi ku dheehantahay looga ciiday galbeedka Australia (Perth) iyada oo salaadii ciidul adxa kadib la’isug soo baxay Park wayn oo loo yaqaano Kings Park halkaas oo dhamaan bulsho wayntu isoogu timid iyaga oo wajigoodu ka muuqatay farxada maalinta wayn ee Ciidul Adxa.
Hadaba Jaaliyada Soomalida Ogadenia ee kunool perth ayaa hambalyo ciid iyo salaan u diraya guud ahaan umada muslimka ah gaar ahaan Madaxda qaaliga ah ee ONLF/JWXO, Ciidamada geesiyiinta ah ee Jabhada wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) iyo dhamaan shacab waynaha S.Ogadenia meelkasta ooy joogaan.
Ugu danbayn jaaliyada S.Ogadenia ayaa rajaynaya inay ciidan ciideedakale ku ciidaan bash bash baraaqoiyo Ogadenia oo xor ah Insha’Allah.
maan shaa alaahu waa farxad